Fivoahana an-tsaha SAMPATI XIII – FJKM Ambavahadimitafo Fivoahana an-tsaha SAMPATI XIII |
Fivoahana an-tsaha SAMPATI XIII
Publié le 05 janvier 2010 à 08:01
Ny SAMPATI XIIIème Ambavahadimitafo dia nahavita ny Fivoahana an-tsaha ny 28 sy 29 Novambra 2009 teo tany Ambatomanga.
Ny firaisankina nisy teo @ Komitin’ny faha-60 taona sy ny commissions maro (Oraganisation générale, Lieu, Cuisine, Transport, Activités, Uniforme) ary ny fifankatiavan’ny rehetra no nentina nanomana sy nahatanterahan’ny Lasy.
Ny Lasy dia nizotra tsara ary nahitana mpandray anjara toy izao:
· Mpanazava sy Tily am-perinasa : 82
· Raiamandreny sy Komitim-Pivondronana ary ireo Mpanazava sy Tily Tranainy mianakavy : 79
· TOTALIN’NY MPILASY : 161
Ny fiainganan’ny fiara iombonana nitaterana ireo mpilasy dia ny Sabotsy tamin’ny 8 ora sy sasany mahery teo Ambohijatovo ary ny fahatongavana tany Ambatomanga dia tamin’ny 10 ora maraina.
Rehefa vita ny Fandaminana ny fotoana sy ny trano dia nosokafana teo anatrehan’ny Filoham-Piangonana sady Tily Tranainy RALAMBOMAHAY Mino sy ireo Filohan’ny Lasy rehetra tamin’ny 11 ora ny Fivohana an-tsaha izay nomanina.
Naroso ny sakafo tamin’ny 12 ora sy sasany ka rehefa tomombana ny fikarakarana rehetra dia niroso tamin’ny activités rehetra teo ambany fitarihan’ny Mpiandraikitra izany ny Mpilasy.
Teo ny Lalao sy Hira maro samihafa mampiavaka ny Mpanazava sy Tily izay notanterahina ankalamanjana ary teo koa ny afon-dasy izay natao an-trano noho ny orana izay nanomboka nirotsaka ny alina.
Nitohy ny Alahady ny fotoana ka raikitra indray ny Lalao sy Hira maro samihafa rehefa avy nanao fanompom-pivavahana maraina tao an-dasy.
Nahafinaritra ny fiainana an-dasy fa samy nandray anjara mavitrika daholo na ny am-perinasa na ny tranainy sy ny fianakaviany. Na nisy aza ny reraka dia mbola nahitana Mpanazava sy Tily Tranainy ary ireo zanany maharaka tsara ny fiainana an-dasy.
Ny Lasy dia nofaranana ny Alahady tolakandro tamin’ny 3 ora ary ny Mpilasy rehetra dia tafaverina teo Ambohijatovo tamin’ny 5 ora hariva.
Fisaorana no atolotra ireto olona rehetra ireto noho ny fahavitan’ny Lasy antsakany sy andavany:
· Ny Raiamandreny Mpitandrina sy ny Fiangonana manontolo tamin’ny fitondrana am-bavaka ny fikasana rehatra,
· Ireo Raiamandreny mpanohana rehetra ara-pitaovana, toy ny fiantohana fiara nanaovana ambulance, sy ara-bola ary ara-panafody,
· Ireo Komitin’ny Jobily faha-60 Taona sy ireo commissions rehetra niara-niasa tamim-pitiavana,
· Ireo Mpanazava sy Tily Tranainy rehetra ary ireo vady aman-janany,
· Ny Tonia sy ny Komitim-Pivondronana,
· Ny Talen-tsekoly FJKM Ambatomanga izay nampiantrano,
· Ary ireo Raiamandrenin’ny Mpikambana Mpanazava sy Tily eto Ambavahadimitafo sy ireo zanany rehatra nilasy.
Tafita ny tanjon’ny Fivoahana an-tsaha niarahan’ny rehetra dia ny hahazoana mankalaza ny Jobily Faha-60 Taona, mampiroborobo ny SAMPATI ary mampahafantatra ny Fiangonana sy ny Fianakaviana ny Fitaizana Skotisma.
Misaotra sy mankasitraka ny rehetra ary mandrampihaona indray.